27 October, 2019 in Maqaallo by BANA Mogdishu Office
Qaadirku siduu qorsheeyay qararka ka yimid samada 14 qarni kahor risaalada dunidu ku kala socoto aakhirana doonta badbaadadu tahay risaala-sidihii u damneeyay Maxamed Ibni C/LLaahi Ibnu Mudhalib Ibnu Haashim cs xaflad heerkeedu sareeyo dhalashadiisi
Khilaafka mufasiriinta dunida Islaamka ku qotoma dhigidda mawlidka waa halkiiye, guntii iyo gabangabadii, xafladdii quruxda badnayd lagu xusayay dhalashadii rasuulka cs ka dhacday gobolka Zurich waddanka Switzerland waxaa shuyuuqdii siirada nebiga goobta ka aqrisay ka mid ahaa sida:-1.Macalin Maxamed C/LLaahi oo aayaadka Quraanka furitaanka xafladda ka aqriyay. 2.Macalin Abuukar Macalin Carabay oo dikri qalbiga taabanaya goobta sood dheer ku hoggaaminayay. 3.Shiikh Maxamuud Xuseen u dhashay Carab oo banaanshiyaha mawlidka bayaaniyay. 4.Shucayb C/LLaahi Maxamed Muxsin oo siirada Afka Jarmalka ku soo jeediniyay. 5.Macalin Nuur Macalin Maxamed oo ku dheeraaday faahfaahinta dhalashadii nebiga cs. 6.Shiikh Axmed Duuri oo ku nuuxnuuxsaday mashruuca xafladda aadka la isugu yimid. 7.Macalin Cumar Macalin C/Raxmaan oo xiriirinayay habsamida ay u socotay xafladdu iyo ardayda dugsiga Quraanka iyo tarbiyada diinta Islaamka Khulafaa'u-Raashudiin oo iyana si wayn uga dhex muuqanayay kulankan nashiiddooyina ka qaadayeen.
Tawxiidka lagu hodmaa tasbiixda badsaan ku iri walaal qaali ah amar Alle laakiin!!